ဓမ္မရသ: November 2008
ကုမုဒြာတွေ ပွင့်တဲ့ည (၁)
ကုမုဒြာတွေ ပွင့်တဲ့ည (၂)
သံဃာ့ဂုဏ်ရည် - ၁ - အပိုင်း(၁)
သံဃာ့ဂုဏ်ရည် - ၁ - အပိုင်း(၂)
သံဃာ့ဂုဏ်ရည် -၂ - အပိုင်း (၁)
သံဃာ့ဂုဏ်ရည် -၂ - အပိုင်း (၂)
ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်၊ ဓမ္မစကြာနှင့် အနတ္တလက္ခဏသုတ် တရားတော်များ
“ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ဗေဒင်၊ နက္ခတ်”
မူလစာမျက်နှာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဓမ္မဆောင်းပါး ဓမ္မဒါန
ယခုအချိန်မှာ အတုအယောင်တွေ၊ ထေရ၀ါဒ မဟုတ်သော အယူအဆများသည် ထေရ၀ါဒကို တိုက်ရိုက်မတိုက်ခိုက်သော်လည်း သာသနာကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ တိုက်ခိုက်နေကြသည်ကို ကျနော်တို့တွေ သိရှိပြီး လက်မခံကြဖို့ အရင်ဆုံးပြောပါရစေ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ကျနော်တို့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ရည်မှန်းချက်သည် မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်ရရှိပြီး နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်ရှိရန် တရားအားထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သာသနာ မဟုတ်သော မည်သည့် အယူအဆကို မဆို ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့ပါ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့၏ ရည်မှန်းချက်ကို အနီးဆုံးသောလမ်းနဲ့ သွားကြရပါမယ်။ ထို့ကြောင့် သစ္စာတရားများ နာကြားသိရှိစေရန်နှင့် သိရှိပြီးသော တရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ သတိပေးပါရစေ။ တရားနှင့် သေဆုံးသော မထက်ထက်အောင်၏ ဈာပန ဗွီဒီယို ကို ပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ကြပါ။ ကြည့်ပြီး မိမိတို့သည်လည်း တနေ့တော့ သေရမယ် ဆိုတာ သတိသံဝေဂရကြပါ။ အသက်ငယ်ပါသေး ဆိုပြီးတော့ တရားကို မျက်နှာလွဲထားရင်တော့ သံသရာ တကြောမှာ မျောရပေးဦးမယ်။ တရားတော်ကို နာယူမှတ်သားကာ ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ ဘလော့မှ ဓမ္မတေးသီချင်းကို ညာဘက်အစွန်ဆုံးကော်လံ “ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ” ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ဘုရားခန်းပုံမှာပိတ်ပြီးမှတရားဖွင့်ပါ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 28.11.08 11 ရေးသားခဲ့ရန်
ဧည့်သည်ဆိုတာကတော့ မိမိအိမ်ကို ခဏတာလာတဲ့သူ၊ အချိန်တိုကာလမျှသာ နေထိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ အားလုံးကို ပြောကြတာပါ။ တို့များဧည့်သည်ပါ ဆိုတော့… ကျနော်တို့တွေ အားလုံးက ဧည့်သည်တွေ လို့ ဆိုလိုခြင်းပါ။ လူ့လောက ဆိုတဲ့ အိမ်ဆီကို လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေပါပဲ။ အမှန်တော့ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ခဏလေးပါ။ ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်တွေးကြည့်ရင်ပဲ ထင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ အချိန်တွေမှာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် မည်သည့်အရာတွေနဲ့ မွေ့လျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြန်ပြီး သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ လူ့သက်တမ်းအရ ကြည့်ရင်ပဲ ကျနော်တို့ ဒုတိယအရွယ်ကို ရောက်လာပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ လူ့သက်တမ်း တွက်ပုံလေး တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်လက်ထက်က လူ့သက်တမ်းက (၁၀၀)နှစ် ပါ။ သာသနာတော်နှစ် ၁၀၀ ပြည့်တိုင်း
လူ့သက်တမ်းက ၁ နှစ်လျော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခု သာသနာတော်နှစ် (၂၅၅၂) ဖြစ်တာကြောင့် ၂၅နှစ်လျော့ပြီး ၇၅ နှစ်ဖြစ်တာပါ။ သက်တမ်းအရ အသက်ရှည်ခွင့်ရဦးမယ်လို့ ပုံသေတွက်ထားလို့ မရပါဘူး။ သေခြင်းတရား ဆိုတာ အမှည့်လွန်တဲ့ အသီးလိုပဲ အချိန်မရွေး ကြွေကျသွားနိုင်တယ် ဆိုတာ နှလုံးသွင်းဖြစ်ကြပါ။ (နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာ အသက်များစွာ သေခဲ့ရတာတွေဟာ သက်သေပေါ့။ သံဝေဂ ရစရာပါပဲ။)။ ဒီလို နှလုံးသွင်းဖြစ်မှ သံဝေဂဉာဏ်ရပါမယ်။ သံဝေဂဉာဏ်ရမှ တရားအား ထုတ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပါမယ်။ သံဝေဂဉာဏ် မရပဲ လက်ရှိအခြေအနေကို ရေရှည်တည်တံ့မယ်ထင်ပြီး ပျော်ပါးနေဦးမယ် ဆိုရင်တော့ သံသရာ တကြောမှာ မျောရပါတော့မယ်။ ပုထုဇဉ်ဆိုတာ ကိလေသာ အင်မတန် ထူထဲပါတယ်။ ဒီနေ့လောကမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတတ်မှုတွေ များလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေ တိုးတတ်လာတာဟာ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ဆုတ်ယုတ်စေပါတယ်။ ဥပမာ၊ ဖုန်းတွေ စပေါ်တော့ လူတိုင်းကိုင်ချင်ကြတယ်။ ဒီတော့ ကြိုးစားရပြီ။ လူက မသိပေမဲ့ စိတ်ကိုသေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် လောဘက ဦးဆောင်ပြီး လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ (လောဘသည် ကိလေသာ တရားပါ)။ ဖုန်းရပြီးတော့လည်း နောက်ထပ်ရမယ် ဆိုရင် ထပ်လိုချင်ပြန်တာပဲ။ ဒီတော့ လောဘအလို လိုက်ရင်တော့ လမ်းဆုံးကို ရောက်မှာ မဟုတ်တော့ပါ။ ဒါတွေရဲ့အကြောင်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတတ်မှုတွေကြောင့်ပါ။ တိုးတတ်လာမှုကို မကောင်းပြောခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိလေသာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ကြိုးစား မလုပ်မိစေရန် အသိပေးတာပါ။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဒကာထွန်းတင်ကို အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
“မောင်ထွန်းတင်ရေ… အခုလို သိပ္ပံပညာတွေ ထွန်းကားလာပြီးတော့ အသံဖမ်းယူနိုင်တာဟာ အသုံးချတတ်ရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲကွ၊ အသုံးမချတတ်ရင်လည်း အပါယ်ငရဲကို ဇောက်ထိုးဆင်းဖို့ပဲ၊ သတိရှိဖို့လိုတယ်”
ကျနော်တို့တွေ တကယ့်ကို လေးလေးနက်နက် နာယူလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ယခု ကွန်ပျူတာတွေရှိ နေခြင်း ကြောင့် သာသနာနဲ့ဝေးရာ ရောက်နေသော်လည်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့၏ တရားတွေ၊ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှု မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သိပ္ပံပညာရဲ့ ကျေးဇူးပါပဲ။ အသုံချမှ အသုံးကျတတ်တဲ့ သဘောလေးပါ။ သတိရှိပြီး ကောင်းတဲ့ဘက်မှ အသုံးချဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အမ်ပီသရီးလေးတွေနဲ့ အသံဖိုင်ထဲ့ပြီး တရားတွေ နာလို့ရနေပါတယ်။ နားကို အလှဆင်တာဟာ နားကပ်မဟုတ်၊ တရားစကားနာကြားခြင်း ဆိုတဲ့ စာသားလေး ကို မှတ်သားဖူးပါတယ်။ မိမိတို့ ရလာတဲ့ ဧည့်သည်ဘ၀လေးမှာ အသုံးကျကျ နေသွားတတ်ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ အသုံးမချရင်တော့ အရှုံးကြီး ရှုံးရပါမယ်။ ကျနော်တို့တွေဟာ အခု ရနေတဲ့ ခန္ဓာက သေမင်းဆီက ခဏတာငှားထားရတာပါ။ အချိန်တန်လို့ သေချိန်ရောက်ရင် ဒီခန္ဓာကြီးကို သေမင်းဆီ ပြန်အပ်ခဲ့ ရမယ်။ ဒီတော့ မသေခင်မှာ အသုံးချဖို့ လို့ပါလိမ့်မယ်။ နွားပိုင်မရှ်ိတဲ့ လယ်သမားတွေဟာ သူများနွားကို အခကြေး ငွေပေးငှားပြီးလယ်ထွန်ရပါတယ်၊ အဲလို အခကြေးငွေပေးငှားပြီး ခိုင်းရရင် ကိုယ်ပေးတဲ့ ငွေနဲ့တန် အောင်ခိုင်းရပါတယ်၊ တန်အောင်မခိုင်းရင် ကိုယ်ရှုံးပါတယ်၊ ထိုနည်းတူ ကျနော်တို့ ယခုရနေတဲ့ ခန္ဓာကြီးဟာ ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ငွေနဲ့ သေမင်းဆီက ခဏငှားထားရတာပါ၊ သေမင်းကို ပြန်မအပ်ခင်မှာ ဒီခန္ဓာကြီးကို တန်အောင်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။ ဒီခန္ဓာကို ကျန်းမာအောင် အာဟာရဖြည့်ဆည်း၊ ဆေးဝါးနဲ့ပြုပြင် ပေးရတာရှိမယ်။ ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဉာဏ်ကို ခန္ဓာကို စေလွှတ်ပေးရမယ်။ ဒီလို ခန္ဓာကို ဝိပဿနာဉာဏ် စေလွှတ်ပေးခြင်းသည် ဒီခန္ဓာကို အသုံးချတာပဲ။
၀ိပဿနာ အားထုတ်ဖို့သည် အရေးကြီးလို့ အရင်ပြောတာပါ။ ၀ိပဿအလုပ် အားမထုတ် ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ အိမ်ရှင် လောကကြီး ကျေးဇူးကို တဖန်ပြန်ဆပ်ဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကလည်း သူတပါးအကျိုးလုပ်ဆောင်ရင်း မိမိအကျိုးအတွက် လုပ်တာပါပဲ။ အသက်မဲ့တဲ့ ညောင်ပင်က လူတွေ အတွက် အရိပ်ရအောင် ပေးဆပ်နိုင်တယ်။ ကျေးငှက်တွေစားဖို့ အသီးပေးနိုင်တယ်။ အသိဉာဏ် မရှိတဲ့ နွားတွေက လူတွေရဲ့ အလုပ်မှာ များစွာကျေးဇူးပြုတယ်။ အဟာရရှိတဲ့ နွားနို့တွေပေးဆပ်နိုင်တယ်။ အသိဉာဏ် ရော အသက်ပါရှိတဲ့ ကျနော်တို့ လောကလူသား ဧည့်သည်တွေက လောကကြီး ကောင်းကျိုးအတွက် လေးတော့ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ ကြည့်မနေပဲ အများအကျိုး ဆောင်ရွက်တဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းလေးတွေပါ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ပရဟိတ လုပ်ဆောင်ပြီဆိုရင်တော့ အတ္တဟိတ ဆိုတဲ့ ငါ့အကျိုး၊ ငါ့အတွက်ဆိုတာကို စွန့်သင့်ရင် စွန့်ရပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်မှာ လောဘတွေ လျှော့ပြီး မေတ္တာ၊ ဂရုဏာနဲ့ အများအကျိုး လုပ်ဆောင်ရင်ပဲ လောဘပယ်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာရှေ့ထားလုပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒေါသလည်း မဖြစ်ရပါဘူး။ ဒီတော့ လောဘ၊ ဒေါသ စတဲ့ ကိလေသာ တွေနည်းပါး ပျောက်ကွယ်သွားအောင် သတ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် တရားအလုပ် လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (အနုသယ ကိလေသာကိုတော့ ၀ိပဿနာဉာဏ်နှင့်မှသာ ပယ်နိုင်ပါမယ်)။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ ရလာတဲ့ ခဏတာ အချိန်အတွင်းမှာ လောကအကျိုး၊ မိမိအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ကြတာဟာ လောက အတွက် ဧည့်သည်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လောကီ အာရုံတွေမှာပဲ အလိုက်မှားနေကြရင်တော့ ကံကို ထိုင်စားရာ ရောက်ပြီး ကိုယ့်သံသရာ သမိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးရပါမယ်။ အဲဒီ သမိုင်းကတော့ စာနဲ့ ရေးခြင်း မဟုတ်ပဲ။ ခန္ဓာတွေဖြစ်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် မွေးဖွားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းတွေနဲ့ လည်ပတ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဘုရားရှင် နောက်ဆုံး မှာကြားခဲ့တဲ့ “၀ယဓမ္မာသင်္ခါရ အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ” (သင်္ခါရ- အဘိသင်္ခါရတရားတို့သည်၊ ၀ယဓမ္မာ- ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိကြပါပေကုန်၏၊ အပ္ပမာဒေန- မမေ့၊ မလျော့၊ မပေါ့၊ မဆ၊ မြဲမြံတဲ့ သတိတရားဖြင့်၊ သမ္ပာဒေထ- ပြည့်စုံရစ်ကြပါကုန်လော့၊) ဆိုသည့်အတိုင်း ပျက်စီးတတ်တဲ့ သဘောကို နှလုံးသွင်း လိုက်နာကျင့်ကြံဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ မိသားစုတွေမှာ အမိ၊ အဖ သေခါနီးရင် မှာကြားတဲ့ အတိုင်း သားသမီးတွေက လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ မိဘဆိုတဲ့ ကျေးဇူးတရား အသိစိတ်လေးနဲ့ပဲ နားထောင်လိုက်လုပ်ကြတယ် ဆိုရင် မဟာကရုဏာနဲ့ ဆုံးမဟောကြားခဲ့တဲ့ ဘုရားရှင်၏ တရားတော်တွေသည် ပိုပြီးတော့ လိုက်နာသင့်ပါပြီ။
မိမိတို့ ခဏတာ နေခွင့်ရတဲ့ ဧည့်သည်ကာလမှာ အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချပြီး ကောင်းကျိုးလိုရာ ဆန္ဒများ ပြည့်ဝ အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 23.11.084ရေးသားခဲ့ရန်
ဒီနေ့ (၁၈.၁၁.၂၀၀၈) ဟာ ကျနော်ရဲ့ ၂၄နှစ် ပြည့်တဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက်ကြတဲ့ မောင်နှမ၊ မိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေလို့ အရင်ဆုံး ကျနော်ကပဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
မွေးနေ့အတွက် ကျေးဇူးတော်ရှင် ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ ဟောကြားတဲ့ မွေးနေ့အလှူတရားနဲ့ ကောင်းမှုပြုပါတယ်။ တရားတော်ကို နာယူကြည်ညိုကြပါ။ ဓမ္မဒါန စာအုပ်များကိုလည်း ကူးယူပြီး လေ့လာမှတ်သား၊ ကျင့်ကြံ အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
(၁) ပိဋကတ်သုံးပုံ ပါ။ (ပါဠိ မြန်မာပြန် ဖြစ်ပါတယ်)။ ကူးယူထားကြပါ။
(၂) သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်၏ ပုံတော်။ ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်း။ တရားဦး ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်။ (ပါဠိ မြန်မာပြန်)။ အနတ္တလက္ခဏသုတ်။ (ပါဠိ မြန်မာပြန်)။ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော် စာအုပ်များ။ (ပါဠိ မြန်မာပြန် အကျဉ်း)။ အဘိဓမ္မာ အခြေခံစာအုပ်။ သုတေသန သရုပ်ပြအဘိဓာန်။ ဆရာတော်ကြီးများ၏ သြ၀ါဒစကား မှတ်စုများ။ စာဖိုင်များ။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေပါ။ ဖိုင်တခုထဲမှာ ဇစ်ဖိုင်ချုပ်ပြီး တင်ထားပါတယ်။ မိမိတို့ မိတ်ဆွေများကို ထပ်မံဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြင့် ဓမ္မဒါန ပြုကြပါ။
တရားနာကြားပါရန်။ ဘလော့မှ ဓမ္မတေးသီချင်းကို ညာဘက်အစွန်ဆုံးကော်လံ “ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ” ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ဘုရားခန်းပုံမှာ ပိတ်ပြီးမှ တရားဖွင့်ပါ။
အချိန် ၁ နာရီလောက်သာ ကြာပါတယ်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 18.11.08 29 ရေးသားခဲ့ရန်
အမေ… ဒီနေ့ ၁၈.၁၁.၂၀၀၈ ရက်နေ့ဟာ သားကို အမေ မွေးဖွားပေးခဲ့တာ ၂၄ နှစ် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ရုတ်တရက် အမေ ပြောဖူးတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းကို အမှတ်ရမိတယ်။ “သားရယ်… သားကို မမွေးဖွားခင် ညတုန်းကတော့ အလူးအလဲ ခံစားရတာပေါ့၊ နောက်နေ့မနက်မှာ သားကို မွေးလည်းပြီးရော အမေ ခံစားခဲ့ရတာတွေက ဘယ်ရောက်သွား မှန်းကို မသိဘူး”။ အဲဒီအချိန်က အမေ ပြုံးပြီးတော့ ပြောခဲ့တာပါ။ သားကို ဘယ်တော့မှ မမေ့အပ်စေတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းပါ အမေ။ သား ဒီနေ့အချိန်မှာ ရပ်တည်နေထိုင်နိုင်တာဟာ အမေ့ ကျေးဇူးတွေ ကြောင့်ပါပဲ အမေ။ အမေ အကြောင်းစာအုပ်တွေဖတ်ရင်းနဲ့ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ ရေးသားတဲ့ “အသက်ပေးပြီး ချစ်တဲ့ အမေ” စာအုပ်ထဲမှာ…
“ဗဟုပကာရ ဘိက္ခဝေ မာတာပိတရော ပုတ္တာနံ၊”
“ချစ်သားတို့… မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေအတွက် အလွန်ပင် ကျေးဇူးကြီးမားပါပေတယ်”
● နို့ချိုတိုက်ကျွေး၊ သက်ရှင်ရေး၊ ပြုပေးတတ်တာ မိဘပါ။
● ကောင်းကျိုးကိုတွေး၊ လောကရေး၊ သင်ပေးတတ်တာ မိဘပါ။
ဆိုတဲ့ စာတွေကို ဖတ်မိတော့ အမေ့မျက်နှာကို မြင်ယောင်မိပါတယ်။ အမေဆိုတာ သားသမီး တွေကို မြတ်နိုးတတ်သော စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကို ခေါ်တာပါပဲ အမေ။ အဲဒီ မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်မှာ တစ်စုံတစ်ခုသော ကိလေသာ မပါ ပါဘူး။ ငယ်စဉ်က သားတို့ အတွက်ရသမျှ အလုပ်ကို လုပ်ပြီး သားတို့ကို ကျွေးမွေးခဲ့ရတာ သားမှတ်မိပါသေးတယ်။ အမေ ရေထမ်းရောင်းလို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ချက်ကျွေးခဲ့တဲ့ ဘဲဥဟင်းဟာ သားတို့ အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သားတွေကို ပညာတတ်ဖြစ်ပြီး တင့်တယ်စေချင်ခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ စေတနာ၊ မေတ္တာကို အခုအချိန်မှာ ပိုပြီး နားလည်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ရင် ၀တ်ဖို့ အကျီ၊ ဘောင်းဘီ၊ လွယ်အိတ် တွေကို နွေရာသီ ကတည်းက အမေ စီစဉ်ပေခဲ့ပေးတာတွေ၊ ကျောင်းသွားခါနီးရင် ဦးနှောက်ရွှင်အောင်ဆိုပြီး အုန်းဆီတွေ ရွဲနေအောင် လိမ်းပေးခဲ့တာတွေ၊ ၀တ်ထားတဲ့ ထမီလိပ်ကြားထဲက ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းမုန့်ဖိုးတွေ၊ သားတို့ ပညာတတ်အောင် ကြိုးစားကြ၊ ပညာမတတ်ရင် ပင်ပန်းဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားသံတွေဟာ သားတို့အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာစိတ် တစ်ခုတည်းကြောင့် ဆိုတာ သား သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီပုံရိပ်လေးတွေက သားတို့ အတွက် မေ့ဖျောက်ထားလို့ မရခဲ့ပါဘူး အမေ။ အခုအချိန်ထိ သား ဘ၀ရဲ့ ရလာတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေဟာ အမေ့ ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပါ။ သား အတွက်စိတ်အေးရပေမဲ့ ညီလေး အတွက်ဆိုပြီး အမေ အမြဲ စိတ်ပူနေတာပဲနော်။ သား တို့ကို ဘယ်တော့မှများ စိတ်ချတော့မှာလဲ အမေ။ သားတို့ အတွက် လောကဓံတွေကို အန်တုခဲ့ရတာတွေ၊ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာတွေဟာ သားတို့ကို အမေ ပေးခဲ့တဲ့ ခွန်အားတွေပဲပေါ့။ အခုဆိုရင် အမေ အသက်က ၅၀ ပြည့်တော့မယ်။ သာမန်အမြင်လေးနဲ့ပဲ ကြည့်ရင် တတိယ အရွယ်ကို ရောက်တော့မယ် အမေ။ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀က ကြမ်းတမ်းခဲ့တာကြောင့် အမေ့မှာ ဝေဒနာတွေ မကြာခဏ ခံစားနေရတာလည်း သားသိပါတယ်။ အမှန်တော့ သားတို့တွေက လူ့ဘ၀ကို လာတဲ့ ဧည့်သည် တွေပါပဲ။ သားနဲ့ အမေဆိုတာ သံသရာ ခရီးသွားချင်း လူ့ဘ၀ ခဏတာမှာ ဆုံတွေ့လာတဲ့ သူတွေပါ အမေ။ ဒီသဘောလေးကိုတော့ အမေ့ရင်ထဲမှာ နှလုံးသွင်း မှန်မှန် နားလည်ထားပါ။ သားတို့က လက်ရှိ ဘ၀ဖြစ်နေတဲ့ သမုဒိနယ်ကိုလဲ သိရမယ် အမေ။ အမေက သားတို့အပေါ်ပြုခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတွေက များလှပါပြီ။ အမေ့ရဲ့ ကျေးဇူးတွေကို သား ဆပ်ခွင့်ရနေတာ အင်မတန် ၀မ်းသာမိပါတယ်။ အမေရဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေကို ငွေကြေးတွေနဲ့ ဆပ်လို့ ဘယ်တော့မှ မကျေနိုင်ပါဘူး အမေ။ ဓမ္မပူဇာ ဆိုတဲ့ တရားနဲ့ ဆပ်မှာသာ ကျေနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ အမေရေ… သားပို့ပေးတဲ့ တရားခွေတွေနာပြီး တရားဓမ္မနဲ့ မွေ့လျော်စေချင်ပါပြီ။ ငါ့သားတို့ နောင်ရေး အတွက်ဆိုတဲ့ အမေ ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ဆန္ဒတွေကို လျော့ချပြီး အမေရဲ့ သံသရာ ခရီးအတွက် ပြင်ဆင်ပါတော့ အမေ။ သေမင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ အားမွေးပါ အမေ။ နောက်တခုက ဘ၀ဆိုတဲ့ ဒုက္ခသစ္စာ မှာဖြစ်နေတော့ ဒုက္ခတရားတွေနဲ့ တွေ့ရတာဟာ မထူးဆန်းပါဘူး အမေ။ ဘ၀မှာ လူဆင်းရဲလို့ အပါယ်မရောက်ပါဘူး။ ဥစ္စာမရှိလို့လည်း အပါယ်ရောက် မသွားပါဘူး။ သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ၊ ဟိရိ၊ သြတပ္ပ ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်း ဥစ္စာ(၇)ဖြာ ရှိနေရင် ချမ်းသာတာပါပဲ အမေ။ သားတို့တွေ ဇာတိ ဆိုတာ ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှတော့ ဇရာ(အိုခြင်း)၊ ဗျာတိ(နာခြင်း)၊ မရဏ(သေခြင်း) ဆိုတဲ့ အရာတွေကို ရှောင်လို့မရဘူး အမေ။ ဒီတော့ သာတို့ ပြင်ဆင်ထား ရတော့မယ်။ ခဏလေးနဲ့ ပြင်ဆင်မှုဟာ အောင်မြင်မှု အတွက် အခွင့်အရေးနည်းပါတယ်။ အချိန်တိုင်းမှာ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တဆိုတဲ့ လက္ခဏာရေး သုံးပါးတင်ပြီး ၀ိပဿနာ တရားတွေ အားမထုတ် နိုင်ခဲ့ရင်တောင် ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့တော့ မွေ့လျော်နေပါတော့ အမေ။ ဒီအတွက် ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ဆင်ခြင်၊ သတိရတဲ့ ဗုဒ္ဓနုဿတိလေး ပွားနေတာ အမေ့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ သား ထင်မိတယ်။ သားတို့တွေဟာ အချိန်နဲ့ အမျှသေမင်းဆီကို သွားနေကြရတာပါ။ သေခြင်းဆီကို သွားနေတဲ့ သူတွေပေါ့။ သေခြင်းဆီကို သွားနေတဲ့ သားတို့က သေခြင်းကင်းလွတ်ရာအမှန် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားတွေကို အားထုတ်ကြရမယ်လေ။ တရားအားထုတ်တဲ့ အလုပ်ကို ဘုရားရှင်ချီးမွမ်းပါတယ်။ သိပြီးတော့ ဘာမှမလုပ်ပဲ၊ ဘုရားကို ကန်တော့ နေသူကို ဘုရားရှင် မလိုလားဘူး အမေ။ ဘုရားရဲ့ တရားအတိုင်း ကျင့်ကြံတာကိုပဲ သားတို့ ဘုရားက ချီးမွမ်းတာပါ။ ဒီတော့ သားတို့လည်း ဘုရားဖြစ်စေချင်တဲ့ အတိုင်း တရားကျင့်ရမယ် အမေ။ တရားတွေနာပြီး လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်နိုင်ပါစေ။ တရားအားထုတ်ရာမှာလည်း မိမိ ခန္ဓာ ကောင်းစွာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အတွက် ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရ လေးပါးလုံး ညီညွတ်အောင် နေရမယ်၊ လုပ်ဆောင်ရမယ်။ အဲဒီလေးပါးထဲက တပါးပါး ချို့ယွင်းရင် ခန္ဓာက ကောင်းစွာ မနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် နေ့တိုင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကံတွေနဲ့ ထုံမွမ်းထားပါတော့။ စိတ်ကလေး တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် ထားပြီး တရားအားထုတ်တဲ့ အလုပ်ကို နေ့တိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ အမေ။ ပြောင်းလွယ်၊ ဖောက်ပြန်လွယ်ရှိတဲ့ ရာသီဥတုတွေမှာ ကျန်းမာရေး အတွက် မျှတအောင်နေပါ။ လိုအပ်တဲ့ အစားအစာ၊ ဆေးဝါးတွေ သုံးစွဲပြီး ကျန်းမာအောင်နေပါ အမေ။ အမေ အတွက်လည်း သား ပြုသမျှ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကို အမြဲတမ်း အမျှပေးဝေပါတယ်။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ဆိုပါ အမေ။
အမေ တရားတော်များကို နေ့စဉ်၊ နေစဉ်နှင့်အမျှ အားထုတ်ကြိုး စားနေနိုင်ပြီး စိတ်၏ငြိမ်းအေးမှုကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 17.11.086ရေးသားခဲ့ရန်
သ ဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန် နဲ့ သုညတနိဗ္ဗာန် ဆိုတာက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကျင့်ကြံပြီး
ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ နိဗ္ဗာန် ခေါ်တာလား... ပြီးတော့ ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် အကြောင်းလေးကို ရှင်းပြ
ပေးပါနော့်.. ဘုရား၊ ရဟန္တာတို့ အသက်ထင်ရှားရှိစဉ် ခံစားအပ်သော နိဗ္ဗာန် တဲ့ အဲဒါကိုသိပ်နားမလည်ပါ။ အသက်ရှိစဉ်ခံစားအပ်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုးကို ပြောတာလဲဆို တာနားမလည်ပါဘူး။
သ ဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန် နဲ့ သုညတနိဗ္ဗာန်ကို လူတွေကျင့်ကြံပြီး ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျင့်ဖို့ နည်းလမ်းအတွက်တော့ ဆရာကောင်း အရေးကြီးတာပေါ့။ ကိုယ်တိုင်းလည်း တကယ်ကို နိဗ္ဗာန်လိုချင်စိတ် ရှိရမယ်။
ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် ဆိုတာက ဘုရားရှင် နဲ့ ရဟန္တားတာတွေ ဖလသမာပတ် ၀င်းစားတဲ့ အခါမှာ စိတ်ထဲမှာ မကြာမကြာ ထင်ပေါ်နေတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ခေါ်ပါတယ်။ မျက်မှောက် ဘ၀မှာပဲ အားရုံပြု ရသောကြောင့် “ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၀ိပါတ်စိတ် (အကျိုးစိတ်) များ နဲ့ ကမ္မဇရုပ် (ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်) များ ကို “ဥပါဒိ” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဥပါဒိ ရှိနေစဉ်မှာပဲ အားရုံပြုရတာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် “သ ဥပါဒိသေသ” နိဗ္ဗာန်လို့ ခေါ်ဆိုခြင်းပါ။
ဒါတွေက ကျနော် သိသလောက် အကျဉ်းလေး ရှင်းပြလိုက်ရတာပါ။ ၀ိပတ်စိတ်နဲ့ ကမ္မဇရုပ် အကြောင်းတွေကျတော့ အဘိမ္မာသင်ဖူးရင် ပိုရှင်းမယ်ထင်တယ်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ရေးတဲ့ ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ စာအုပ် စာမျက်နှာ ၃၄၅ မှာ အဲဒီအကြောင်း ရေးထားပါတယ်။
နိဗ္ဗာန် အကြောင်းပတ်သတ်လို့ လယ်တီနိဗ္ဗာန်ကျမ်းမှာတော့ စုံအောင်ရေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ အောင်ကလင့်က တဆင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
အစ်မမက်မက်.. လပြည့်နေ့မှာ အလုပ်နဲနဲများနေလို့ ချက်ချင်း မဖြေပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ မရှင်းသေးတာရှိလည်း ထပ်မေးပါ။ ကျနော် သိသလောက်တော့ ဖြေပါမယ်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 13.11.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်
ဓမ္မမိတ္တအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ … ယနေ့ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၅၂)ခုနှစ်၊ ကောဇာ သက္ကရာဇ် (၁၃၇၀)ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့၊ ၁၂.၁၁.၂၀၀၈ (ဗုဒ္ဓဟူး)၊ “သာမညဖလ အခါတော်နေ့” ဖြစ်ပါတယ်။
သာမညဖလ အခါတော်နေ့ တရားတော်ကို www.shwepyithu.blogspot.com တွင် နာကြား ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
“ကာလေန ဓမ္မဿဝနံ ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ” သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အခါမှာ သူတော်ကောင်း တို့၏ တရားတော်ကို နာကြားခြင်းသည် ကောင်းမြတ်သော မင်္ဂလာတရားဖြစ်ကြောင်း ဘုရားရှင်က မင်္ဂလသုတ်မှာ ဟောကြားထားပါတယ်။ တရားနာကြားတဲ့ အခါမှာလည်း ပုဂ္ဂိုလ်မရွေး၊
ဂိုဏ်းမရွေးပဲ တရားတော်ကို နားကြားသင့်ပါတယ်။ အမှန်တော့ မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတွေကို နာကြားရာမှာ ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဆင့်အတန်းကို ရွေးချယ်နေဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ “ခုဇ္ဇုတ္တရာ” ကျွန်မကြီးရဲ့ ဟောပြောချက်ကို သခင်မ “သာမာဝိတီ” နဲ့ ရံရွှေတော်တွေ ရိုသေ၊ လေးစားမှု အပြည့်နဲ့ နာယူကြတဲ့ အကြောင်းတွေကို အားလုံး သိရှိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ အချို့ကျတော့လဲ တရားနာဖို့ မလိုပါဘူး။ တရားဆိုတာ ရင်ထဲရှိရင် ပြီးရောလို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ တရားအလုပ်ဆိုတာ တရားမရှိသေးလို့ လုပ်နေကြတာ၊ တရားရှိပြီးသား လူက လုပ်စရာ မလိုဘူး လို့လဲ ပြောကြပါတယ်။ ဒါတွေက ပညာမရှိလို့ ပြောထွက်ကြတာပါ။ အင်မတန် မှားယွင်းပါတယ်။ တရားနာခြင်းကြောင့် လက်တွေ့မှာပဲ အကျိုးကျေးဇူး တွေရရှိပါတယ်။
(၁) အသုတံ သုဏာတိ = မကြားဘူးတဲ့ စကားကို ကြားရခြင်း။
(၂) သုတံ ပရိယောဒါပေတိ = ကြားဖူးတဲ့ စကားကိုလဲ ထပ်မံကြား၍ ရှင်းလင်းစွာသိရခြင်း။
(၃) ကင်္ခံဝိဟနတိ = ယုံမှားသံသယကို ပယ်ဖျောက်နိုင်ခြင်း။
(၄) ဒိဋ္ဌိံဥဇုံ ကရောတိ = အယူဖြောင့်မှန်အောင် ပြုပြင်နိုင်ခြင်း။
(၅) စိတ္တံသီဒတိ = စိတ်နှလုံးကြည်ခြင်း။
“သစ်ဆန်းကြားနာ၊ စင်ကြယ်စွာသား၊ ယုံမှားပယ်တက်၊ ဖြောင့်မတ်ယူမြင်၊
စိတ်ကြင်လင်ရိုး၊ ဤငါးမျိုးသည် တရားနာရာ အကျိုးတည်း။”
(ဓမ္မစေတီဆရာတော် အရှင်ကောသလ္လ )
နံပါတ်(၃) နဲ့ နံပါတ်(၄)တို့မှာ ပြဆိုထားတဲ့ စကားဟာ “ဒိဋ္ဌိ” နှင့် “၀ိစိကိစ္ဆာ” ကို တရားနာခြင်း ဖြင့် ရှေဦးစွာ အကြမ်းပယ်ခွာ နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုးနှင့် အဓိပ္ပါယ်တူပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရာကြီးက “ဒိဋ္ဌိ” နှင့် “၀ိစိကိစ္ဆာ”ကို တရားနာခြင်း၊ တရားဆွေးနွေးခြင်း ဆိုတဲ့ “သိမှု” ဖြင့် ရှေးဦးစွာ ခွာထားရမယ်။ ဒုတိယအဆင့်ကတော့ “ကျင့်မှု” ဖြင့် ခွာရမယ်။ တတိယအဆင့်ကတော့ မဂ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ “ပယ်မှု” ဖြင့် ခွာရမယ်လို့ ဟောကြား သတိပေးတော် မူခဲ့ပါတယ်။
နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားကို မြတ်စွာဘုရားလောင်းနှင့် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အလောင်းတို့မှ တပါး၊ အခြားသော အဂ္ဂသာဝကအလောင်း၊ မဟာသာဝကအလောင်း တွေဟာ တရားနာမှုနှင့် ကင်းပြီး မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်ကို မရနိုင်ကြပါ။
တရားနာပေမဲ့ တရားမရနိုင်တဲ့ အကြောင်း ငါးပါးရှိပါတယ်။
(၁) တရားတော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း။
(၂) တရားဟော ပုဂ္ဂိုလ်အား မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း။
(၃) မိမိကိုယ်ကိုမိမိ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း။ (ငါက နုပါသေးတယ်။ ငယ်ပါသေးတယ်။ စာလည်း ကောင်းကောင်းမတတ်၊ အိမ်ယာထောင်တဲ့ လူ့ဘောင်ကိုလဲ မစွန့်နိုင်… စသဖြင့် မထီမဲ့ပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်)။
(၄) ပျံ့လွင့်တဲ့ စိတ်၊ မတည်ကြည်တဲ့ စိတ်ဖြင့် တရားတော်ကို နာခြင်း။
(၅) မသင့်မတင့်တဲ့ အကြောင်းဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း။
အထက်ပါ ၅ ချက်နှင့် တရားမနာမိကြဖို့ သတိပေးပါရစေ။ အထူးသတိပေးလိုသည်မှာ- တရားနာကြားရုံနှင့် တရားမရနိုင်ပါ။ တရားနာကြားလို့ ရရှိလိုက်တဲ့၊ သိလိုက်တဲ့ အသိပေါ်မှာ လက်တွေ့ကျင့်သုံး မှသာလျှင် မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရား ရနိုင်မှာပါ။ ဘုရားရှင်က ကိုယ့်ဘေးနား မှာ ရှိနေပေစေ မိမိကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု မရှိသ၍ တရားမရနိုင်ပါဘူး။
ထို့ကြောင့် တရားမှန်ကို ရှာဖွေခြင်း၊ တရားနာခြင်း၊ သူတော်ကောင်းထံ ဆည်းကပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ တရားတော်ကို လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်ခြင်း ပြုလုပ်ကြပါရန် တိုက်းတွန်းအပ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 12.11.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်
နိဗ္ဗာန် ၉ပါးကို အကျယ်သိချင်ပါတယ်။ မသိလို့မေးတာပါနော်။ အဲဒါလေးကို ရှင်းပြပေးပါ
နော်။ နိဗ္ဗာန် ၉ပါးဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ သိချင်လို့ပါ။
နိဗ္ဗာန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် ဟောတာကိုက အနက်ပေါင်း၊ ပရိယာယ်ကွဲ ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမျိုးအစားတူရာ သင့်ရာကို ခွဲပြီး နိဗ္ဗာန်(၃) မျိုး၊ နိဗ္ဗာန် (၅) မျိုး၊ နိဗ္ဗာန် (၇)မျိုး စသည် ခွဲခြားပြောကြပါတယ်။ (သုခမှတ်စု စာအုပ်မှာ (၅)မျိုး၊ ဦးသြဘာသ ရေးထားတဲ့ သုတေသနသရုပ်ပြ အဘိဓာန်မှာ (၇) မျိုး တွေ့ ရပါတယ်)။
မေးထားတဲ့ နိဗ္ဗာန် ၉ပါးဆိုတာတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ရေးသားထားတဲ့ ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ စာအုပ်မှာတော့ နိဗ္ဗာန်၏ ဂုဏ်တော်အချို့လို့ ရေးထားတာတွေ့ ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ နိဗ္ဗာန်၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါးကို ထုတ်ဖော်ရေးထားပါတယ်။
ပထမဆုံး နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဝေါဟာရတွေ များနေပေမယ့် နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အလုံးစုံသော ဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်ခြင်း ဆိုတာကို အကြမ်းအားဖြင့် နားလည်ထားရင် လုံလောက်ပါတယ်။
(၁) သ ဥပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန် = ခန္ဓာကိုယ်အကြွင်းရှိသော နိဗ္ဗာန်၊ အရိယာတွေ အသက်ရှင်လျက်နဲ့ အခု ၀ိပဿနာလုပ်ရင်း အခု ခံစားရရှိလိုက်တဲ့ နိဗ္ဗာန်၊ မသေဘဲရတဲ့ နိဗ္ဗာန်ပေါ့။ ဒါကို ဒိဋ္ဌွဓမ္မ နိဗ္ဗာန်လို့လဲ ခေါ်တယ်။ (ဒါကို ရဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဒါမှ ပြုံးပြီးသေနိုင်မယ်)။
(၂) အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန် = ရဟန္တာတွေ၊ ဘုရားရှင်တွေ နောက်ဆုံး ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုခြင်းကို ပြောတာ။ နောက်ထပ် ခန္ဓာ အသစ်လဲ မဖြစ်တော့ဘူး။ အလုံးစုံသော မွေး၊ သေ၊ ဒုက္ခ၊ သံသရာဝဋ်တွေကနေ လွတ်မြောက်သွားတာကို ပြောတာပါ။ ဘုရားရှင်တို့လို၊ မိုးကုတ် ဆရာတော်ကြီးတို့လို အသက်သေသွားပြီးမှ ခံစားရရှိသော နိဗ္ဗာန်။ (သမ္ပရာယိက နိဗ္ဗာန် လို့ လဲ ခေါ်တယ်)။
(၃) သုညတ နိဗ္ဗာန် = ကိလေသာတွေ ဆိတ်သုဉ်းနေသော နိဗ္ဗာန်။ သင်္ခါရ တို့မှ ကင်းလွတ်သွားသော နိဗ္ဗာန်။ ဒီမှာ နိဗ္ဗာန်ကို သုညနဲ့ ယှဉ်ရင် ရုပ်နာမ်တွေ အလုံးစုံ သုည ဖြစ်သွားတာလို့ မယူဆရဘဲ ကိလေသာတွေ သုညဖြစ်သွားတာလို့ သိရပါမယ်။
(၄) အနိမိတ္တ နိဗ္ဗာန် = သင်္ခါရ နိမိတ်တို့မှ ကင်းလွတ်သွားသော နိဗ္ဗာန်။ ဒါကတော့ ဒါနပြုလို့လဲ နောက်ဘ၀ ဘယ်လိုကောင်းသွားမယ် ဆိုတာမျိုး မရှိတော့တာပေါ့။ ဒီအချက်မှာ ဆရာတော်တွေ သဘောထားမတူတာတွေ ရှိတယ်။ ဥပမာ၊ ဘုရားရှင် တရားဟောပြတာ ကုသိုလ်ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီကုသိုလ်က နောက်ပဋိသန္ဓေကို အကျိုးမပေးတော့တဲ့ ကုသိုလ်လို့ ယူဆတဲ့ ဆရာတော်တွေ ရှိတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကုသိုလ်ဆိုတာကိုက ပါဠိမှာ အပြစ်ကင်းသော ချမ်းသာခြင်း ဖြစ်ပြီးနောင်အကျိုးပေး ကောင်းမှုကို ရည်ရွယ် အနက်ဖွင့်တာမို့လို့ ဘုရား၊ ရဟန္တာတွေ ကောင်းမှုတွေ ဆက်လုပ်တာဟာ ကုသိုလ်အနေနဲ့ မရတာ့ဘူး။ ကြိယာသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြုပြင်စီရင်ခြင်း သင်္ခါရ န်ိမိတ်တွေကနေ ကင်းသွားတာပေါ့။ ပဋိသန္ဓေ သင်္ခါရ ကင်းသွားပြီး အပဋိသန္ဓေ နိဗ္ဗာနံ ဖြစ်သွားတာလို့ စာလိုပြောကြတယ်။
(၅) အပ္ပဏိဟိတ နိဗ္ဗာန် = တဏှာ တို့မှ ကင်းလွတ်သွားသော နိဗ္ဗာန်။ ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အားလုံးအပေါ် လိုချင်တောင့်တခြင်း ကင်းသွားတဲ့ သဘောပါပဲ။
နိဗ္ဗာန် (၇)မျိုး ကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားခဲ့ရပါတယ်။ (၉မျိုး ဆိုတာ အခုတော့ မတွေ့ရ သေးပါဘူး)။
(၁) ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန် = ဘုရား၊ ရဟန်းတာတို့ အသက်ထင်ရှားရှိစဉ် ခံစားအပ်သော နိဗ္ဗာန်။
(၂) သမ္ပရာယိက နိဗ္ဗာန် = ပရိနိဗ္ဗာန် စံပြီးနောက် နိဗ္ဗာန်။
(၃) သ ဥပါဒိသေ နိဗ္ဗာန် = ခန္ဓာကိုယ် အကြွင်းရှိသော နိဗ္ဗာန်။
(၄) အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန် =ခန္ဓာကိုယ် အကြွင်းမရှိသော နိဗ္ဗာန်။
(၅) သုညတနိဗ္ဗာန်= ကိလေသာ ကင်းစင်သော နိဗ္ဗာန်။
(၆) အနိမိတ္တနိဗ္ဗာန် = သင်္ခါရ နယ်နိမိတ် ကင်းစင်သော နိဗ္ဗာန်။
(၇) အပ္ပဏိဟိတ နိဗ္ဗာန်= တဏှာ တောင့်တခြင်း ကင်းစင်သော နိဗ္ဗာန်။
လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီးက “နိဗ္ဗာန်၏ အကြောင်းကို ချဲ့ထွင်ပြီး အသေစိတ် မသိချင်နေပါစေ။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း လမ်းမှန်ကိုသိရှိ ကျင့်ကြံဖို့က သာ၍ အရေးကြီးကြောင်း၊ လိုးရင်း ဖြစ်ကြောင်း” မိန့်ဆိုတော် မူခဲ့ဖူးပါတယ်။
နိဗ္ဗာန်ဟူသည် ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိတဲ့ အသင်္ခတနယ် လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အရဆိုရင် နိဗ္ဗာန်ဟာ အကျိုး၊ အကြောင်းမှ ကင်းလွတ်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ အကုသိုလ် အကြောင်းတရား ၅ကျပ်ဖိုး လုပ်မိရင်၊ ကုသိုလ် အကြောင်းတရား ၅၀ဖိုးလောက် ပြုလုပ်ပြီးတော့ ရှေ့ကပြုခဲ့တဲ့ အကုသိုလ် အကျိုးနည်းအောင် လုပ်လို့၊ ပြင်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကုသိုလ်က အကျိုးမပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ကုသိုလ်များတော့ အကုသိုလ် အကျိုးက မသိသာသလို ဖြစ်တဲ့သဘောပါ။ ( ဆား တဇွန်းဟာ ဖန်ခွက်အသေးလေးထဲ ထဲ့ရင် ငန်တဲ့ အရသာက သိသာမယ်။ ရေကန်ထဲ ထဲ့လိုက်ရင် ငန်တာက မသိသာ သလိုပဲပေါ့)။ နိဗ္ဗာန်မှာက ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုက လွတ်ပါတယ်။ မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရား တွေရရင် အားလုံးက တန်းတူဖြစ်သွားတာပါ။ (သုပ္ပဗုဒ္ဓနူနာသည်ရဲ့ သောတပတ္တိမဂ်နဲ့ အနာထပိဏ်သူဋ္ဌေးရဲ့ သောတပတ္တိမဂ်က အတူတူပါပဲ)။
ဇာတိစတဲ့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခအမျိုးအမျိုး၊ ကိလေသာ အမျိုးမျိုး၊ ဒုက္ခ အမျိုးမျိုးတို့ တည်ရာ ခန္ဓာငါးပါး မရှိခြင်းကို နိဗ္ဗာန် လို့ဆိုပါတယ်။ “ဥပဓိ ၄ပါး” မှကင်းလွတ်ရင်လည်း နိဗ္ဗာန်လို့ ခေါ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပဓိ လေးပါးကတော့…
(၁) ကာမုပဓိ = ၀တ္ထုကာမလို့ ဆိုတဲ့ ကာမဂုဏ် ငါးပါးကို အစွဲဟုပြီး သုခဝေဒနာ၊ သောမ နဿဝေဒနာ၊ တို့ဖြစ်တယ်။ ထိုဝတ္ထုကာမ တို့ဟာ သုခဝေဒနာ၊ သောမနဿဝေဒနာ တို့ရဲ့ တည်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့် “ကာမုပဓိ” လို့ခေါ်ပါတယ်။
(၂) ခန္ဓုပဓိ = ခန္ဓာငါးပါးတို့ဟာ ဇာတိစတဲ့ ဆင်းရဲတို့ရဲ့ တည်ရာ၊ မှီရာဖြစ်ခြင်းကြောင့် “ခန္ဓုပတိ” လို့ခေါ်ပါတယ်။
(၃) ကိလေသုပဓိ = ကိလေသာတို့ဟာ အပါယ်ဆင်းရဲတွေရဲ့ တည်ရာ၊ မှီရာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် “ကိလေသုပဓိ” လို့ခေါ်ပါတယ်။
(၄) အဘိသင်္ခါရုပဓိ = ၀ဋ်ဆင်းရဲ ဘ၀အမျိုးမျိုး တိုရဲ့ တည်ရာ၊ မှီရာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ ပုညာဘိ သင်္ခါရ၊ အပုညာဘိသင်္ခါရ၊ အနဉ္ဇာဘိသင်္ခါရ တို့ကို “အဘိသင်္ခါရုပဓိ” လို့ခေါ်ပါတယ်။
မဖောက်မပြန် အလွန်မှန်တဲ့ ပရမတ္ထသစ္စာလေးပါးမှာ “နိဗ္ဗာန်” ကို “နိရောဓသစ္စာ” လို့ဆိုပါ တယ်။ “နိရောဓသစ္စာ” ဆိုတဲ့ စကားကို ပုဒ်ခွဲလိုက်တော့၊ “နိ + ရောဓ + သစ္စာ” လို့ သုံးမျိုး ထွက်လာပါတယ်။ “နိ” ဆိုတာက “မရှိ”၊ “ရောဓ” ဆိုတာက သံသရာဝဋ်ဒုက္ခတွေ အကြိမ်ကြိမ်၊ အဖန်ဖန်ဖြစ်ရခြင်း၊ “သစ္စာ” ဆိုတာက မဖောက်မပြန်၊ အလွန်မှန်ကန် ခြင်း လို့အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်ပါတယ်။
ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဦးကောသလ္လ ဟောကြားထားတဲ့ တရားတော်မှာတော့ မှတ်သားမိစရာ လင်္ကာလေးတွေနဲ့ မှတ်သားခဲ့ရပါတယ်။
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘယ်ဟာလဲလို ဘယ်ဟာလဲလို့ သဘာဝသိအောင် ရှာလိုက်စမ်းပါ။
ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ်တရားနှင့် အာရုံမများတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကြီးပါ။
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘယ်ဟာလဲလို့ သဘာဝသိအောင် ရှာလိုက်စမ်းပါ။
ကိလေငြိပွေ ဒုက္ခဘေးတို့ အလွန်အေးတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကြီးပါ။
မွေးသေ - မွေးသေ ဒုက္ခဘေးတို့ အလွန်အေးတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကြီးပါ။
ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ အရှုပ်ဇာတ်သိမ်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကြီးပါ။
မေးထားတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကိုတော့ တိကျစွာ မဖြေပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတွက်လည်း အားနာမိပါတယ်။ ကျနော်ရေးတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မရှင်းတာရှိရင် ကျနော့်ကို ပြန်ပြောပေးပါ။ အခြားသိချင်တဲ့ အချက်တွေ ရှိရင်လည်း ပြောပါ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာ အတွေးအမြင် ဗဟုသုတ တွေကို စုံအောင် ဒီနေရာမှာ ထပ်မံ ဖတ်ရှုမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
“ရုပ်၊ နာမ် နှစ်ပါးလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ…”
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 11.11.083ရေးသားခဲ့ရန်
ကျနော်တို့တွေသည် အသိဉာဏ်ပညာ ရှိသော၊ ဝေဖန်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိသော လူ့ဘ၀၊ လူ့လောကကြီးမှာ နေထိုင်ကျင်လည် နေကြသူတွေပါ။ ဒီလို လူ့ဘ၀ကို ဘာတွေလုပ်ဖို့ လာကြသလဲ..? ဘာကိစ္စနဲ့လာကြသလဲ..? ငါကတော့ အင်မတန် ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ကို ရောက်လာခဲ့ပြီ ငါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ..? ငါ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ..? စသဖြင့် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် စမ်းစစ်သင့်တယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။ `ဤလူ့လောကကို ကျနော်တို့ ဘာကိစ္စနှင့် လာကြပါသလဲ´လို့မေးလျှင်၊ အောက်ပါအတိုင်း အဖြေ(၄)မျိုး ရရှိပါလိမ့်မယ်။
(၁) ယခုပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ စား၊ ၀တ်၊ နေရေး အတွက် လူချင်းတူ၊ သူချင်းမျှအောင် ဥစ္စာစီးပွား ရှာဖွေရန် လာကြပါတယ်လို့ အဖြေထွက်ပါမယ်။
(၂) နိဗ္ဗာန်မရခင်စပ်ကြား သံသရာမှာ ကျင်လည်ကြရဦးမယ်။ ကျင်လည်နေစဉ် အထက်တန်း ကျကျနှင့် မျက်နှာပန်းလှလှဖြစ်တဲ့ သူဋ္ဌေး၊ လူချမ်းသာ၊ ဘုရင်၊ တို့၏ စည်းစိမ်တွေကို လိုချင်ပါသေးတယ်။ အဲသည်လို `တမလွန် လူ့စီးပွား´တွေကို ရှာဖို့လာကြပါတယ်လို့ အဖြေထွက်ပါမယ်။
(၃) လူထက်သာလွန်တဲ့ နတ်ပြည် ၆ထပ်က ကောင်းကျိုးချမ်းသာမျိုးကို ရှာဖွေရန် လာကြပါတယ်လို့ အဖြေထွက်ပါမယ်။
(၄) လူစည်းစိမ်၊ နတ်စည်းစိမ်တို့ထက် ထူးကဲသာလွန်တဲ့ ဗြဟ္မာ့စည်းစိမ်ကို ရှာဖွေဖို့ ရောက်လာ ကြပါတယ်လို့ ဖြေကြပါလိမ့်မယ်။
၁။ ဥဋ္ဌာနသမ္ပဒါ = ထကြွလုံ့လ ၀ိရိယရှိခြင်း။
၂။ အာရက္ခသမ္ပဒါ = ရှာဖွေလို့ ရရှိသမျှ ဥစ္စာပစ္စည်းတိုို့ကို ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ခြင်း။
၃။ ကလျာဏမိတ္တ = မိတ်ကောင်း၊ ဆွေကောင်းများရှိခြင်း။
၄။ သမဇီဝိတာ = အ၀င်နှင့် အထွက် မျှတအောင်သုံးစွဲခြင်း၊ ဆိုတဲ့ သမ္ပဒါတရား လေးပါးနှင့် ပြည့်စုံအောင် တရားသဖြင့် လုပ်ရပါတယ်။
တမလွန်လောကမှာ လူ့စီးပွား၊ နတ်စီးပွားတွေကို ရရှိရေးအတွက် `ဒါန´`သီလ´တွေနှင့် ရင်းနှီးရပါလိမ့်မယ်။
ဗြဟ္မာ့စည်းစိမ်အတွက် `မဟဂ္ဂုတ်´ ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ သမထတရားတွေနှင့် ရင်းနှီးရပါလိမ့်မယ်။
လူ၊ နတ်စည်းစိမ်ကို ရစေတဲ့ ဒါန၊ သီလနှင့် ဗြဟ္မာ့စည်းစိမ်ကို ရစေတတ်တဲ့ `သမထ´ တရားတွေကို `စရဏမျိုးစေ့´ လို့ခေါ်ပါတယ်။
စရဏမျိုးစေ့ တွေဟာ ၃၁ဘုံဆိုတဲ့ သံသရာမှ ထွက်မြောက်အောင် တိုက်ရိုက် အကျိုးမပြုနိုင်ကြပါ။ အထောက်အပံ့သာဖြစ်လို့ `လောကီကုသိုလ်´ လို့ခေါ်ရပါတယ်။ ထိုလောကီတရား ဆိုတဲ့ `စရဏ´ မျိုးစေ့တွေဟာ လောကဓံ မုန်တိုင်းမှာ ပြေးလွှားနေကြရတဲ့ သံသရာခရီးသည်များ အဖို့ ဖြစ်လေရာရာဘ၀မှာ မျက်နှာပန်းလှလှ အထက်တန်းကျကျ စား၊ ၀တ်၊ နေရေးအတွက် များစွာပင် ကျေးဇူးပြုကြပါတယ်။ ဥပမာ။ ရထားစီးရာမှာ ရိုးရိုးတန်းစီးတဲ့ လူဆင်းရဲတို့မှာ ကြပ်တည်းငြိုငြင်စွာနဲ့ ခရီးသွားကြရပါတယ်။ အထက်တန်းစီးနိုင်တဲ့ လူချမ်းသာတွေကတော့ သက်သာချောင်ချိစွာ ခရီးသွားနိုင်ကြပါတယ်။ ထိုနည်းတူ `စရဏမျိုးစေ့´နည်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ အဆင့်အတန်း နိမ့်ပြီး၊ ဆင်းရဲမွဲတေလျက် ဘ၀သံသရာကို လည်ကြရပါတယ်။
`စရဏမျိုးစေ့´ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ ဖြစ်လေရာ ဘ၀မှာ အဆင့်အတန်းမြင့်စွာ သွား၊ လာ၊ နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် `ဒိဋ္ဌိ´ (မှားယွင်းစွာသိမြင်မှု) နှင့် `၀ိစိကိစ္ဆာ´ (ဘုရား၊ တရား တို့၌ ယုံမှား သံသယရှိမှု) မပြုတ်သေးတဲ့ လောကီကုသိုလ်ပိုင်ရှင် ပုထုဇဉ်တွေဟာ ကုသိုလ်အရှိန်ကုန်တာနဲ့ အပါယ်ဘုံတွေကို လျောကျကြရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် `ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိဿာ၊ အသူရကာယ်ဆိုတဲ့ အပါယ်လေးဘုံ တို့ဟာ ဒိဋ္ဌိနှင့် ၀ိစိကိစ္ဆာ မပြုတ်သေးတဲ့ ပုထုဇဉ် တို့၏ ဇာတိချက်ကြွေ၊ အမြဲနေထိုင်ရာ အိမ်နှင့်တူပါတယ်´ လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ထို့အတွက်ကြောင့် လောကသို့ ကျနော်တို့ ဘာကိစ္စနှင့်လာကြပါသလဲ..? ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ဖြေရာမှာ `ဒါန၊ သီလ၊ သမထ ဆိုတဲ့ စရဏ ကုသိုလ်ကို ရှာဖို့လာကြပါတယ်´ လို့ဖြေရင် မပြည့်စုံသေးပါဘူး။ `၀ိဇ္ဇာဆိုတဲ့ လောကုတ္တရာ ကုသိုလ်ကို အဓိကထားပြီး ရှာရန် လာကြပါတယ်´ လို့ ဖြေဆိုမှသာ မှန်ကန်ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ `လောကုတ္တရာ´ ဆိုတဲ့ စကားကို `လောက+ ဥတ္တရ´ လို့ပုဒ်ခွဲရပါတယ်။ လောကဆိုတာ `ကာမဘုံ (လူ၊ နတ်ပြည် ၆ထပ်)၊ ရူပဘုံ (ရုပ်နာမ်ရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ (၁၆) ဘုံ)၊ အရူပ (ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ (၄) ဘုံ)၊ စတဲ့လောက သုံးပါးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥတ္တရ ဆိုတာက `ထွက်မြောက်ခြင်း´ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ထိုစကားနှစ်လုံး ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ `လောကသုံးပါး´မှ ကျွတ်လွတ် ထွက်မြောက်ခြင်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ထိုလောကမှ ထွက်မြောက် ကျွတ်လွတ်တဲ့ လောကုတ္တရာ တရားတို့မှာ.. မဂ်လေးပါ၊ ဖိုလ်လေးပါ၊ နိဗ္ဗာန် ဆိုပြီး (၉) ပါးရှိပါတယ်။ ထိုတရား (၉)ပါးကို နှုတ်ပယ်ပြီး ကျန်တဲ့ တရားဟူသမျှက လောကီတရားတွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လောကုတ္တရာ တရားတို့ကိုလည်း ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာတော်တွင်းနှင့် ကြုံကြိုက်မှသာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ယခု သာသနာတော်နှင့် ကြုံနေပါပြီ `ကြိုက်ဖို့သာ´ လိုပါတော့တယ်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် ယခုခေတ်သက်တမ်း ၇၅နှစ် ထားကြပါစို့။ ၂၅ နှစ်ကျော်ရင် ဒုတိယအရွယ်ထဲ ရောက်နေကြပါပြီ။ ဘယ်လိုတရားတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးတော့ ကုန်လွန်ခဲ့တယ် ဆိုတာ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် အသိဆုံးပါ။ ဘာလိုပင် ဖြစ်နေပါစေ.. လွန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေဟာ ယခုစာဖတ်နေသူနှင့် ဘာမှ မသက်ဆိုင်တော့ပါ။ သေမည့်ဘက်ကို တစ တစ နီးကပ်လာပြီဖြစ်လို့ အသက်သည် `ကြီးလာပြီ´ လို့မဆိုထိုက်ပဲ၊ `ငယ်၍ ငယ်၍၊ လျော့လျော့ လာပြီ´၊ သေဘက်သို့ နီးကပ်၍ လာပြီလို့ ဆိုလျှင် ပိုပြီးမှန်ပါလိမ့်မယ်။ တိုတောင်းလှတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ `၀ိဇ္ဇာ´ဆိုတဲ့ လောကုတ္တရာ ကုသိုလ်ကို မရှာကြပဲ၊ စရဏ ဆိုတဲ့ လောကီ ကုသိုလ်တွေနှင့်သာ တင်းတိမ်၊ ရောင့်ရဲ နေခဲ့ကြရင်တော့ ဇာတိချက်ကြွေ အပါယ်လေးဘုံသို့ ပြန်ကြရပါလိမ့်မယ်။
ဤသို့ဖြင့် `၀ိသာခါ၊ သာမာဝတီ၊ ခုဇ္ဇုတ္တရာ၊ အနာထပိဏ်´စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို လူဝတ်နှင့်ပင် `၀ိဇ္ဇာမျိုး´ ကုသိုလ်လို့ ဆိုတဲ့ `၀ိပဿနာ´တရား ကို အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းဘေးတွေက မဦးခင် ကြိုတင် ကြိုးစား အားထုတ်ကြပါရန် ရေးသား ဒါနပြုလိုက်ရပါတယ်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 8.11.08 10 ရေးသားခဲ့ရန်
“နက္ခတ္တံ ပဋိမာနေန္တံ၊ အတ္ထော ဗာလံ ဥပစ္စဂါ။
အတ္ထော အတ္ထဿ နက္ခတ္တံ၊ ကိံကရိဿန္တိ တာရကာတိ။”
နက္ခတ်ကောင်းကို စောင့်မျှော်နေသော လူမိုက်ကို ကောင်းကျိုးချမ်းသာများက လွန်မြောက်သွားကြသည်။ ကောင်းသောအလုပ်ကို စလုပ်သောနေ့သည်ပင် ကောင်းသော နက္ခတ်ဖြစ်၏။ ကောင်းကင်မှာ သွားနေသော နက္ခတ်များသည် အဘယ်အကျိုးစီးပွားမှ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်။
(ဧကနိပါတ်၊ နက္ခတ္တဇာတက၊ န၀မဇာတက (၁)၊ စာမျက်နှာ(၁၂) )။
ကျနော်တို့တွေသည် ဘာသာတရားအရပြောရရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမတွေကို လိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့သူလို့ အရိုးရှင်းဆုံး ပြောလို့ရပါ တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်သည် အခြေခံအားဖြင့် ကံနှင့် ကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်ရပါမယ်။ အဲဒီလို ယုံကြည်လိုက်တာကို ကမ္မဿကတ သမာဒိဋ္ဌိဉာဏ် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဟာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာသည်သာ ကိုးကွယ်အားထားရာ အမှန်လို့ ရွတ်ဆိုနေပြီးတော့ အခြားသော လောကီပညာရပ်တွေ အပေါ်မှာ အားထားရာအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်လာကြသည်မှာ မသင့်တော်ပါ။ ဘာလို့ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာကြလဲ စမ်းစစ်ကြည့်ရင် ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးအပေါ်မှာ ယုံကြည်ချက် အားနည်မှု၊ လောကီရေးရာ လတ်တလော အဆင်ပြေချင်မှု တွေကိုတောင့်တ၊ မက်မောတဲ့ အတွက်ကြောင့်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ယုံကြည် ချက်နဲ့ ကိုယ်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်လို့ မိမိတို့ အားထားချင်ရာတွေကို လုပ်ဆောင်ကြတာ အပြစ်ဆိုခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အမှား၊ အမှန်သေချာ ခွဲခြား သိစေချင်တာပါ။ ဗေဒင်၊ နတ်၊ ဘိုးတော်၊ မယ်တော်၊ နက္ခတ်တွေ အပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု၊ အားထားရာတစ်ခုလို့ ထင်မှတ်နေခြင်းတွေသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုံးဝ မသင့်တော်ပါဘူး။ ထိုအရာတွေကို ကိုးကွယ်အားထားလို့ လက်ရှိအခြေမှာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အဆင်ပြေကောင်း ပြေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် အပါယ်သံသရာကို မကျဘူးလို့ ဗုဒ္ဓ၊ ဓမ္မ၊ သံဃ မှတပါး အခြားသော ကိုးကွယ်မှုများသည် အာမခံချက် မရှိပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်နှင့် တွေ့ကြုံပြီး တရားတွေနာကြား ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ ယခုလို အချိန်အခါမှာမှ တရားတွေ မကျင့်ကြံ၊ မလိုက်နာကြဘူးရှိရင် လူဖြစ်ရှုံး ရပါမယ်။ သံသရာ တလျောက်လုံးက ပါလာတဲ့ အမှားတွေကို စွန့်လွတ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ လောကသတ္တ၀ါတွေ ကောင်းကျိုးအတွက် ပါရမီတွေ ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတရားတွေ၊ ဘုရားရှင် ဖော်ထုတ်ဟောခဲ့တဲ့ တရားတွေ၏ ကျေးဇူးတွေ၊ ထိုတရားတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ၏ ကျေးဇူးတရားတွေကို သိတတ်ကြရပါမယ်။ အချို့သောသူတွေ လုပ်တတ်တာလေးတွေ ပြောပါမယ်။ မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နှင့် စဉ်းစားဆုံး ဖြတ်ဖြစ်ပြီးမှ လက်ခံကြပါ။ ဗေဒင်ဆရာက ယတြာချေခိုင်းလို့ ဘုရားမှာ အမွေးတိုင်၊ ဆီမီးပူဇော် ကြတယ်။ ဘုရားကို ကိုးကွယ်ပူဇော်မှုသည် သက်ရှိထင်ရှား ရှိသလို နှလုံးသွင်းပြီး ကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာ သိနှင့်ပြီးသားပါ။ ဘုရားရှေ့မှာ အမွေးတိုင်တွေ၊ ဖယောင်း တိုင်တွေ စုပြီး ထွန်းညှိပူဇော်တာ မသင့်တော်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရှေ့မှာတောင် အမွှေးတိုင် ၅တိုင်လောက်ထွန်းပြီး နေကြည့်နိုင်ပါ့မလား။ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက စာအုပ်မှာတော့ ဘုရားကို ညှော်တိုက်နေကြတာပါ လို့ရေးထားပါတယ်။ ဗေဒင်ဆရာက သက်စေ့ ရေသပ္ပါယ်ရမယ် ဆိုတော့ ဘုရားရှင်ကို ဆောင်းတွင်းဖြစ်နေပစေ ခေါင်းကနေ ရေလောင်းတတ်ကြပါတယ်။ ပေါက်မြောက်အောင်လို့ ပေါက်ပန်းလှူခိုင်းတယ်။ အကြံအစည် အောင်ဖို့ ကြံစည်းလှူခိုင်းတယ်။ အရာရာအောင်ဖို့ အဝေရာညွှန့် လှူခိုင်းပါတယ်။ ဒီလိုခိုင်းတိုင်း လုပ်ရင်တော့ မသင့်တော်ပါ။ ဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်ရာမှာလည်း မိမိနှစ်သက်တဲ့ အခေါက်ရေကို စိပ်လို့ရပါတယ်။ ဘယ်နှခေါက်စိပ်ရမယ်၊ ဘယ်ဂုဏ်တော်ပွားရမယ် ဆိုတာ ထေရ၀ါဒမှာ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ လူတွေက ကျဉ်းကြပ်အောင် ကန့်သတ်နေကြတာပါ။ ရက်ရာဇာနေ့မှာ သူတပါးအသက် သတ်လည်း အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ ပြဿဒါးနေ့မှာ ဥပုသ်စောင့်လည်း သီလကုသိုလ်ရတာပါပဲ။ ဒီတော့ အချိန်တွေ၊ နေ့ရက်တွေက ပဓာန မကျဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ ပုဗ္ဗာဏှသုတ်ဟာ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ် (၃)ပါးကို ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်လျှင် အချိန်တိုင်းဟာ ကောင်းသောနက္ခတ်၊ ကောင်းသော နိမိတ်များသာ ဖြစ်နေမည့်အကြောင်း ရတနာ (၃)ပါးကို အခြေခံတိုင်တည် သစ္စာ တရားကို ဖော်ကျူးတဲ့ သုတ်တော် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗေဒင်ပညာဆိုတာ တိုက်ရိုက်တော့ သာသနာကို မထိခိုက်သလိုပါ။ မည်သည့် ဗေဒင်ဆရာမှ သူများအသက်သတ်ရမယ်လို့ ယတြာမပေးပါဘူး။ သူတပါး ပစ္စည်းခိုးပြီး စားရမယ်လို့လည်း မပြောကြပါဘူး။ ဘုရားကို ဘယ်လိုပူဇော်ရမယ်။ ဘာတွေလှူရမယ် စသဖြင့်သာ ပြောကြတာပါ။ ဗေဒင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ကချင်ပြည်နယ်၊ နမ္မားမြို့၊ မင်္ဂလာရာမကျောင်း ဆရာတော်ဦးဉာဏ က ယခုလို ရေးသားထားပါတယ်။ “ဗေဒင်က ရက်ရာဇာနှင့် ပြဿဒါးကို ပဓာန ထားသကွဲ့။ မြတ်စွာဘုရားက ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ်ကို ပဓာန ထားသကွဲ့။ ဗေဒင်က မဟာဘုတ်လေးပါး ပဓာနထား၍ ထူသကွဲ့။ မြတ်စွာဘုရားက သမ္ပတ္တိလေးပါးကို အဓိကထား၍ ထူသကွဲ့။ မြတ်စွာ ဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်တာကို ယုံလျှင် ဘုရား၊ တရား မယုံရာ ကျတာပေါ့။” အင်မတန် သတိပြု သင့်ပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း မဟာဘုတ်ထူတာ၊ နာမည်ပေးနည်း ( ယခင်က ခင်ကြီးဖျော်နည်း၊ နောက်ပိုင်းတော့ မင်းသိင်္ခတို့ သုံးကြတယ်)၊ လက်မှတ်ထိုးတာ၊ လက္ခဏာပညာ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးနည်း၊ ( ဓမ္မသောက အင်းဝရာဇာ။ ဥဿာစိန်ပန်း ဒန်းလှကိုရှာ စတဲ့ လင်္ကာ လေးတွေနဲ့ပါ) စသဖြင့် လေ့လာခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီပညာတွေဆိုတာ ဟောသူက မကျွမ်းကျင်လို့ ဖြစ်စေ၊ ကျက်မှတ်ထားတာ၊ တွက်ချက်တာတွေ၊ ဆုံးဖြတ်တာတွေ မှားလို့ဖြစ်စေ လွဲနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အဟောခံရသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက် တွေကြောင့်လဲ လွဲနိုင်ပါတယ်။ ဗေဒင်မေးတဲ့သူက ကောင်းမှု တွေလုပ်ပြီး မကောင်းကံတွေကို တားနိုင်တာကြောင့်လဲ မှားသွားတတ်ပါတယ်။ ဤနေရာမှာ ဆရာတော်အရှင်ဇ၀န ရေးသားသော စာအုပ်ထဲမှ ထုတ်နှုတ် တင်ပြပါမယ်။ နာမည်ကြီး ဗေဒင်ဆရာတစ်ယောက်က စာချဘုန်းကြီးတပါး၏ ဇာတာကို ကြည့်ပြီး အရှင်ဘုရားမှာ ခန္ဓာပျက်ကိန်းရှိနေပါတယ်။ ယတြာမချေလို့ မရပါဘူးလို့ လျှောက်ထားရာ တပည့်စာသင်သား သံဃာတွေက တုန်လှုပ်သော်လည်း စာချဘုန်းကြီးကတော့ တုန်လှုပ်ခြောက်ချားခြင်း မရှိပါဘူး။ အေးမြကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာက တစ်ချက်လေးမှ ပျက်သွားခြင်းမရှိ၊ ပကတိအတိုင်းပါပဲ။ တပည့်များရော၊ ဗေဒင်ဆရာရော ဆရာတော်ပြောမည့် စကားကို နားထောင်နေကြပါတယ်။ စာချ ဘုန်းကြီးထံမှ စကားသံအချို့ ထွက်လာပါတယ်။ “ဒကာကြီး အခုလိုဟောကြားသတိပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးပဉ္စင်းအတွက်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး”။ ထိုစကားကို ဗေဒင်ဆရာ က မကြိုက်ပါ။ သူ့ပညာကို မယုံကြည်သောကြောင့်လို့ ယူဆပါတယ်။ ထိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်က မပြေပြစ်တဲ့ စကားတွေပြောပါတယ်။ “အရှင်ဘုရား.. တပည့်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း ယတြာမချေဘဲ နေရဲနေကြည့်ပါ။ အခုနှစ် ၁၃၅၃ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပိုတွဲလေးလ အတွင်းမှာ ခန္ဓာပျက်ရင်ပျက်၊ မပျက်ရင်လည်း သေလောက်နီးပါး ရောဂါကို ခံစားရမယ်၊ အကယ်၍ တပည့်တော် ပြောတဲ့အတိုင်း မဖြစ်ဘူးဆိုရင် တပည့်တော်တို့ ဗေဒင်ကျမ်းတွေ အကုန်မီးရှို့ပစ်မယ်”။ လူတစ်ယောက်၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကို ကံတရားထက် ဂဏန်းသင်္ချာများက ပို၍ ဖန်တီးနိုင်သည်ဟု ယူဆလိုက်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မပီသနိုင်တော့ပါ။ ဗေဒင်ဆရာက သူပြောချင်တာ ပြောပြီး ပြန်သွားပါတယ်။ ဗေဒင်ဆရာ၏ အတိအကျဟောချက်ကြောင့် တပည့်များက စိုးရိမ်သဖြင့် ယတြာချေဖို့ အတင်းအကြပ်လျှောက်ထားရာ စာချဘုန်းကြီးက “ငါအမြဲတမ်း ယတြာ ချေနေတာ မင်းတို့ မတွေ့ကြဖူးလား” ပြန်မေးတော့ တပည့်များက “တွေ့ပါတယ်ဘုရား” ဟု လျှောက်ကာ ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အချိန်တွေကုန်လွန်ပြီး ဆရာတော်ကား ဘာရောဂါ အသက်ဘေးမှ မဖြစ်ပဲ၊ စာချဘုန်းကြီးဘ၀မှ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ဘ၀သို့ပင် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါမှ ဗေဒင်ဆရာ ဟောခဲ့သလို အဘယ့်ကြောင့် အသက်အန္တရာယ် မဖြစ်ရကြောင်း ဟောကြားပါတယ်။ အတိုချုံ့ ပြောရရင် ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်ကံတွေကို ဆရာတော်က ယခင်ကတည်းက နေ့စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း၊ ကောင်းမှုတွေနဲ့ ထုံမွှမ်းနေလာခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဒင်ပညာရှင်တွေဆိုတာ ပုထုဇဉ်တွေပဲ။ အဲဒီတော့ အမှားဆိုတာ ဘယ်ကင်းပါ့မလဲ။ ဗေဒင်၊ နက္ခတ်ပညာဆိုတာ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကို ကြိုတင်သိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လောကီပညာ တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ လိမ်းဆေးကို စားဆေးအဖြစ် သုံးလိုက်ရင် အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်သလို ဒီဂြိုလ်ထဲရောက်နေလို့သာ ဒီလိုဖြစ်ရတာ၊ အတိတ်ကံ ပစ္စုပ္ပန်ကံနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ ယူဆလိုက် ရင်တော့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို ဖျက်ဆီးတဲ့ အဓိကအန္တရာယ်ကြီး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဘုရားလောင်း မွေးဖွားစဉ်က ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုပြီး လက်ညိုးတစ်ချောင်းတည်း ထောင်ခဲ့တဲ့ ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏားတောင် ဘုရားလောင်းက ဒုက္ကရစရိယ မကျင့်တော့ဘဲ အစားအစာလဲ ပြန်စားရော ဘုရားမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ ပြန်ပြီး ယုံကြည်သွားလို့ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ (၅)ပါးလုံး ဘုရားလောင်းကို စွန့်ခဲ့ကြတာပဲ။ ဘုရားဖြစ်ပြီး ဓမ္မစကြာတရား ပြန်လာဟောတော့မှ ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတာ သိကြတာပါ။ ဒီတော့ သာမန် လက္ခဏာ၊ ဗေဒင် ပညာမှာ မုချမှန်ပါမယ်လို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။
ဤသို့ဖြင့် ဒီပညာတွေဟာ လေးစားစရာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလောက်အောင် တိတိကျကျ ဟောနိုင်၊ ပြောနိုင်တာတွေ ရှိသလို၊ ကာယကံရှင်ကလဲ ပြန်ပြီးပြုပြင်နိုင်ကြောင်း သေချာနေပါ တယ်။ ဒီတော့ ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န ပြောသလို ပြောရရင် လိမ်းဆေးအဖြစ်ပဲ သုံးသင့်တဲ့ ဆေး ကို သောက်ရင် ပြဿနာ အကြီးအကျယ်တတ်ပါမယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပညာတစ်ရပ်အနေနဲ့ သုံးချင်သုံးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုးကွယ်အားထားရာ အစစ်ဖြစ်တဲ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ တို့ထက် ပိုပြီး အလေးမြတ်ပြုရင်တော့ မသင့်တော်ပါ။ အမှားနှင့် အမှန်၊ အတုနှင့် အစစ် ကွဲပြားဟန်ကို ပိုင်းခြားသိမြင်ပြီး စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါစေ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 3.11.089ရေးသားခဲ့ရန်
ဓမ္မချမ်းသာ တွေ့အောင်ရှာ အိုနာသေခြင်း ကင်းစေသော်
သန့်၊ တည်၊ ပွား အဖွဲ့